E nwere ọtụtụ nke omume na-ekwe ka ị dezie na-agbanwe gị videos. Dị nnọọ otu n'ime ha bụ IMovie. Ọ bụ usoro ihe omume mepụtara maka Apple ngwaahịa. Nke a pụtara na ọrụ nwere ike jiri ya na Mac, iPhone na iPad. Dị ka ọtụtụ ndị reviews, iMovie bụ otu nke kasị mma omume na ahịa. Ọ na-ese na-akpali ma ọ dị mfe iji. Ọzọkwa, ọ na-enye ọtụtụ nke oké atụmatụ. Dị nnọọ otu n'ime ha bụ ngwa ngwa ebugharị. Nke a na nhọrọ na-eji ọkachamara na otutu ndị ọrụ chọrọ na-eme ka na-akpa ọchị na-akpali videos. Dị ka a nnyocha, na-eto eto dị ka nke a atụmatụ na ha na-eji ya iji mee ka na-akpa ọchị videos. Ị pụrụ ịchọ on YouTube na-ahụ a nde videos na e degharịa na nke a oké mma.
Part1: Olee na-ebu ọnụ na-atụ na iMovie on Mac
Part2: Olee na-ebu ọnụ na-atụ na iMovie on iPhone / iPad
Part3: Olee na-ebu ọnụ na-atụ na windows
1. Open a video ke IMovie ma ọ bụ na-eme ọhụrụ oru ngo.
2. Dị ka ọkọlọtọ, video ga-akpọ na a nkịtị ọsọ. Ị nwere ike ọ bịa ọsọ ọsọ dị mfe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa gbanwee ma họrọ Fast n'ihu. E ị ga-ahụ ọzọ nhọrọ. Ị nwere ike adị n'elu a video, 2x, 4x, 8x ma ọ bụ 20x. Ma eleghị anya, ọ dịghị anya ukwuu ma ọbụna mgbe ị na ngwa ngwa na-atụ a video site 2 ugboro, ị ga-ahụ ihe dị iche.
1. Download na wụnye IMovie na ngwaọrụ gị. Ị nwere ike ịchọta usoro na App Store. Ị ga-achọpụta na IMovie nwere ezigbo reviews na otutu mma nzaghachi.
2. Mepee a video ị chọrọ dezie. Ọ dị mfe na-eme ma IMovie ga-emeghe video n'oge na-adịghị mgbe niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka, ị nwere ike pịa ''? '' Na n'elu, n'akụkụ aka ekpe. Na ala, ị pụrụ ịhụ okpokolo agba na ogologo gị video.
3. na n'aka ekpe, ị ga-ahụ abụọ akara ngosi. Otu bụ oke bekee na ọzọ bụ a mbe. Dị ka ị maraworị, a mbe bụ ihe nnọchianya nke ngwa ngwa. Na n'akụkụ nke ọzọ, a oke bekee bụ okwu ọzọ maka ọsọ. Pịa na oke bekee icon, na ịgbanwe ọsọ nke gị video. Mgbe ị na-eme, i nwere ike ịkọrọ ma ọ bụ zipu a video. Nke a bụ zuru okè mgbe ị chọrọ ka a prank ma ọ bụ a egwuregwu.
Windows OS bụ ihe kasị nkịtị sistemụ na ụwa. Nke a pụtakwara na a otutu ọrụ chọrọ dezie ha videos. N'ụzọ dị mwute, Movie Onye kere, a ọkọlọtọ omume na Windows bụghị nnọọ irè. Nke a pụtara, ọrụ ga-chọta ihe ọzọ. Otu n'ime ha bụ Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ nwere ọtụtụ nti reviews, n'ihi ya, ọ ga-adị mma. Ọbụna ka mma bụ eziokwu otú mfe i nwere eji nke a usoro. Ihe niile ị chọrọ ime bụ eso ndị a.
1. Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate. Nke a abụghị free omume, n'ihi ya, ị ga-enwe ịzụta ngwaahịa na aha. Otú ọ dị, i nwere ike ịgbalị a free ngwaahịa. Ị ga-amarakwa na ọ bụghị ihe niile atụmatụ na-akwado free ikpe version.
2. Pịa na tinye faịlụ ma ọ bụ mbubata iji tinye faịlụ ka usoro ihe omume. Ị ga-enwe ike ịchọta ha na draịvụ ike gị. Mgbe ị na-a faịlụ, pịa-emeghe ma na ị na-eme. Cheta na Wondershare Video Converter Ultimate-akwado ndị niile formats. Nke a pụtara na ị nwere ike idezi vidio dekọrọ na iPhone, iPad, Android ekwentị, dijitalụ igwefoto na wdg N'ezie, ị pụrụ ọbụna dezie videos ndị e dere site a web igwefoto. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe faịlụ kpọmkwem n'ime Wondershare Video Converter Ultimate. Nke a bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa ọzọ. Jiri Ctrl na ekpe Pịa akara ọtụtụ faịlụ.
3. Ị ga-ahụ meghere faịlụ na n'elu akaekpe. N'ezie, ọ bụrụ na ị meghere nanị otu, ị ga-ahụ nanị otu video. Ekpe click na ya na ịdọrọ ya ka usoro iheomume. Ị ga-echere sekọnd ole na ole ruo mgbe nke a bụ zuru ezu. Ị ga-enwe ike ịhụ a preview na nri n'elu nkuku. E nwere play na-akwụsị na buttons. Ị nwere ike ịgbanwe olu mgbe niile.
4. Pịa na obere akara ngosi n'elu video (nso mkpa). Ị ga-ahụ a menu ebe i nwere ike ịgbanwe gị video. Otu n'ime ndị atụmatụ bụ ọsọ. Ọ dị mfe ka ịhazie ọsọ. Ị nwere ike ime ka gị na video ngwa ngwa ma ọ bụ iji nwayọọ na sekọnd ole na ole. Bugharịa ihe mmịfe on akụkụ aka nri gị iji-adị n'elu video. Ị ga-achọpụta na oge nke video bụ mkpumkpu mgbe ị adị n'elu ya. Na n'akụkụ nke ọzọ, ọ bụrụ na ị jiri ya ala, ndị video ga-adịru ogologo. Cheta na ọkọlọtọ ọnọdụ bụ n'etiti. Obula na ị chọrọ, ị nwere ike pịa na play button ma hụ otú gị video na-aga anya.
Mgbe azọpụta a faịlụ, ị nwere ike họrọ usoro ị chọrọ. Ị pụrụ ọbụna ịzọpụta a faịlụ karịsịa naanị otu ngwaọrụ. Azọpụta-achọ nanị ole na ole sekọnd.
Dị ka a nnyocha e mere, Wondershare Video Converter Ultimate bụ otu nke kasị mma mmemme na internet, n'ihi na edezi gị videos. Na ya, ị nwere ike ibudata, mbubata, tọghata ma dezie ụdị ọ bụla nke a video ị chọrọ. Ọzọkwa, a otutu ọkachamara eji nke a usoro. Otu nke kasị mma atụmatụ bụ ọsọ nke akakabarede. Dị ka ị maara, ndị ọzọ omume achọ awa ole na ole iji tọghata a video. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa na ya nwere ike tọghata a video na a nkeji ole na ole. A na-emetụta na nnukwu faịlụ na nwere size nke a ọtụtụ gigabytes. Nta videos nwere ike hazie sekọnd ole na ole. The interface bụ nnọọ mma na mfe iji. Ọ bụ ezie na, Wondershare Video Converter Ultimate nwere otutu atụmatụ, ọ dị mfe ịhụ na iji ha.
> Resource> iMovie> Olee na-ebu ọnụ na-atụ na iMovie on Mac / iPad